चीन चढाई भित्ते निर्माण र कारखाना | हाइबर प्ले उपकरण
केहि खेलहरू रक क्लाइम्बि as, तपाईंको शरीरमा हरेक स्नायु र लचिलोपना जस्ता अनौंठो हुन्छ, र तपाईंको अर्को चरणमा सधै अगाडि सोच्ने बानी। तर सब भन्दा राम्रो पक्ष यो हो कि कोही यत्तिको स्वाभाविक रूपमा सुरू हुन्छ, पेशेवर डोरीहरूले सुरक्षित गरेको हुन्छ, कि तपाईंलाई आफ्नै रमाईलोको लागि प्रशिक्षण पनि आवश्यक पर्दैन।
फन वालहरू अन्तर्क्रियात्मक पर्वतारोहण भित्ताहरू हुन् जसले दुबै बच्चाहरू र वयस्कहरू दुवैलाई आरोहणको चुनौतीमा र खेलको मजामा संलग्न गर्दछन्। रंगीन र गतिशील, तिनीहरू सहभागीहरूलाई क्लाइडेबल मध्ययुगीन महल, चक्रव्यूह, बीनस्टलक्स, माकुरो जालहरू, गाढा चिमनी र अधिक धेरैको संसारमा ल्याउँदछन्। चढाईले सन्तुलन, सटीक र साहसको भावना विकास गर्दछ, तर यसको उत्तम अंश यो हो कि यो सबैको लागि स्वाभाविक रूपमा आउँदछ। फन वाल्सको पछाडि टोलीले यी लाभहरूलाई विश्वव्यापी आरोहण दृश्यको वृद्धिसँग जोड्यो, र अन्तर्क्रियात्मक चुनौतीहरूको एक श्रृंखला डिजाईन गर्‍यो। तिनीहरूले एक मनोरञ्जन आकर्षण सिर्जना गरेका छन् जुन सक्रिय मनोरन्जनलाई अँगाल्छ र कुनै विशेष सीप वा प्रशिक्षणको आवश्यकता नगरी धेरै व्यापक जनतालाई आकर्षित गर्दछ।
हाइबरको चढाई भित्ताहरू अन्तर्क्रियात्मक पर्वतारोहण भित्ताहरू हुन् जसले बच्चा र वयस्क दुबैलाई चढाईको चुनौती र खेलको मजामा संलग्न गर्दछन्। रंगीन र गतिशील, तिनीहरू सहभागीहरूलाई क्लाइडेबल मध्ययुगीन महल, चक्रव्यूह, बीनस्टलक्स, माकुरो जालहरू, गाढा चिमनी र अधिक धेरैको संसारमा ल्याउँदछन्।
थ्रीडी चढाई भित्ताहरू
हाम्रो थ्रीडी चढाई भित्ताहरूले पूरै नयाँ तहमा आरोहण गर्दछ। अन्तर्क्रियात्मक तत्त्वहरू जस्तै एलईडी बत्तीहरू, सार्ने होल्डहरू, टाइमरहरू, नब्सहरू र बटनहरूको साथ, प्रत्येक प्रीमियम पर्खालमा उत्साहको एक अतिरिक्त खुराक प्रस्तुत गर्दछ!
अन्तरक्रियाशीलता र तत्वहरूको gamifications
कार्टुन फन वाल
स्विंग फ्यान वालहरू
अघिल्लो: रोप कोर्स
अर्को: बिग FEC-001
१.टोरे निलो बिले
ट्रिपल स्पिड अटो खेलो
विश्वमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने र विश्वसनीय अटो बेले लिनुहोस्, गतिको एक अतिरिक्त खुराक थप्नुहोस्, र तपाईं सत्य स्पीड अटो बेले पाउनुहुनेछ।
यो समान विश्वसनीयता र गुणवत्ता प्रतिष्ठा प्रदान गर्दछ TRUBLUE Auto Belay तर विशेष गरी द्रुत गति आरोहण प्रतियोगिता र प्रशिक्षणको लागि बनाईएको हो। फिर्ता लिने गति द्रुत छ संसारको कुलीन गति पर्वतारोहीहरु भन्दा पनि छिटो छ, र हाम्रो चुम्बकीय ब्रेकिंग परिचित, कोमल वंश प्रदान गर्दछ जुन TRUBLUE प्रसिद्ध छ।
उही म्याग्नेटिक ब्रेकिING
यो उही प्याटेन्टेड म्याग्नेटिक एडी वर्तमान ब्रेकि हो जुन पर्वतारोहीहरू कोमल वंशको कारण मायामा आउँदछन्।
उही भरोसा र कम रखरखाव
एडी वर्तमान चुम्बकीय ब्रेकि fr घर्षण स्वतन्त्र छ र ब्रेकिंग प्रणालीमा कुनै बलिदान पोशाक भागहरू छैन, त्यसैले हाम्रो उपकरणहरू अत्यन्त विश्वसनीय र कम रखरखाव छन्।
पुनः प्रसारण गति
ट्रबल स्पीड अटो बेलले १० मिटर भित्ताको लागि २.7 सेकेन्ड र १m मिटर भित्ताको लागि seconds. seconds सेकेन्डमा फिर्ता लिन्छ, जुन आईएफएससी मापदण्डहरूलाई मिल्नेछ र हालको र भविष्यका विश्व रेकर्डहरूको लागि द्रुत छ।
राइडर वेटको चौडा दायरा
TRUBLUE अटो बेल्सले बजारमा कुनै पनि उपकरणको फराकिलो तौल दायरा समायोजन गर्दछ, १० देखि १ 150० किलोग्राम (२२30–30० एलबीएस) बाट।
प्रति आईएफएससी मापदण्डहरू अनुसार, ट्रबल स्पिड अटो बेलले पर्वतारोहीमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्दछ, त्यसैले परिणामहरू सबै तपाईंको हुन्।
आयाम: x 37 x x 33 x २ 23 सेमी (१ x x १ x x in इन)
उपकरण वजन: १.5..5 किलोग्राम (.8०..8 एलबीएस)
रेटेड कार्य क्षमता: १० देखि १ kg० केजी (२२ देखि 3030० एलबीएस)
अधिकतम वंश गति: २ m / s
वापसी समय (१m मिटर): sec.। सेकेन्ड
२. क्याम्प GT SIT HARNESS
जीटी सिटले डोरी पहुँचकर्मीहरूकोलागि आराममा एक कदम अगाडि प्रतिनिधित्व गर्दछ। हाम्रो SOSPESI अनुसन्धान कार्यक्रमले हामीलाई निलम्बन आघातमा नयाँ अन्तरदृष्टि प्रदान गरेको निष्कर्षहरू पछाडि दोहन विकास भएको थियो। कम्मरको बेल्ट र खुट्टाको लूपहरूको बिचको नवीन सम्बन्धले GT निलम्बनको समयमा र भुइँमा दुवै आरामदायी बनाउँदछ। प्याडि परिवर्तनशील मोटाई र कठोरता को उपयोग गर्दछ शरीरको प्रत्येक भाग को लागी सही मात्राको समर्थन र आराम प्रदान गर्न। प्याटेन्ट भेन्ट्रल एट्याच्मेन्टमा दुई लूपहरू हुन्छन्, एउटा छातीको दोहन र छाती आरोहणलाई जोड्नको लागि र अर्को ल्यानिअर्ड्स, कारबिनरहरू र अन्य उपकरणहरू संलग्न गर्नका लागि। प्याटेन्टेड STS लेग लूपहरूमा स्वत: buckles।
चार एल्युमिनियम मिश्र संलग्नक बिन्दुहरू: १ निलम्बनका लागि भेन्ट्रल, स्थितिको लागि २ साइड, र १ फिर्ता।
जीटी चेस्टको साथ संयोजनको रूपमा प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको छ, दुई एट्याच्मेन्ट पोइन्टहरू (एक अगाडि र एक फिर्ता) लेस गरिएको छ, पूर्ण शरीर गिरावट दोहनका लागि।
(कपडाको साथ मापन [उर्फ कभरेल्स / ज्याकेट] तपाइँको कपडाको मापन होइन)
आकार: १ / SL
कम्मर आकार: -1०-१२० सेमी (.5१..5 - .2 47.२ इन्च)
खुट्टा आकार: -०-65m मी (१ .7 ..7 - २.6. inches इन्च)
प्रमाणपत्र: EN 8 358 EN 13१13 (कुनै पनि एएनएसआई)
तौल: १२०० g (२.6565 पाउन्ड)